Semalt Expert - 7 Inofanira-Kuva neShokoPress Plugin Types
Hatigoni kuramba kuti mamwe mawebsite nemabloggi anopfuura 25% anoshandiswa neShokoPress, achiita kuti ive yakanakisisa yekugadzirisa maitirwo ehurumende. Pane dzimwe nguva apo blogger.com yaiva yega yega yevatengesi vezvakagadzirwa nevanyori, asi ikozvino WordPress inowanzoshandiswa uye inofarira nekuda kwekwanisi yekuwedzera mabasa ewebsite. Mumashoko akajeka, unogona kuwedzera mazana emakumi ezviuru zvezvikwata ku WordPress yako site uye inogona kuvandudza kushanda kwayo. Aya mapaundi akaita kuti zvive nyore kune vadzidzisi uye kwete vanyori kuvaka nekuchengetedza webhusaiti yehupfumi. Iwe haunoda chero ruzivo rwekambani yekugadzira webhusaiti nokuti WordPress plugins iripo kuti kuita basa rako rive nyore uye nekukurumidza kudarika kare. Dzimwe WordPress plugins dzinotibatsira kusimbisa webhusaiti kana bhutiro yepamusoro apo vamwe vanotibatsira kuti tivandudze kutendeuka kwehutano uye kuderedza kuwedzera kwehuwandu.
Oliver King, nyanzvi inotungamirira Semalt Digital Services, yakagadzira 7 mikuru mikuru ye WordPress plugins iwe unofanirwa kuziva nezvazvo.
Kuchengeta ndechimwe chezvinhu zvakanakisisa uye zvakakurumbira zvebhizimisi rako rekuInternet. Inogona kuderedza zvakanyanya nguva yekurayira yemapeji ako ewebhu uye inopa huwandu hwehuwandu hwekushandisa. Uyezve, izvi zvinokurudzira kuti ungaderedza sei kuwedzera kwekutsvaga kwewebsite yako uye unobvisa mafungiro akanaka kune injini yekutsvaga kunyanya Google. Inokurumidza nzvimbo yako yepaiti, iyo yakakwirira uye iri nani iyo yekutsvaga injini rankings. Inofanira kuuya kusishamisi kuti vashanyi vanowanzofamba kubva panzvimbo yako kana vasina kukwira mukati memasekondi mashanu. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuvandudza kutakurwa kwekutsvaga kwewebsite yako nemhando yakakodzera yemapulagi. Kunyange zvazvo pane zvakawanda zvingasarudzwa, asi zvakanakisisa WordPress plugins ndeye W3 Total Cache uye WP Super Cache.
2. Kubhadhara sarudzo
Unofanira kunge wakanzwa kuti mari yose iri mutsamba. Izvi ndizvo zvinoshandiswa nevashambadziri vanobudirira vanotenda. Nhamba huru yevanyori vanogona kukubatsira kukura bhizinesi rako nekukurumidza uye unogona kukutakura iwe mutoro wekutengesa. Ichaitawo kuti webmasters adzokere vashanyi kumasiti avo nema blogs nokukurumidza..Iyo yakanakisisa kubhadhara plugins yeWebsitePress yako site ndeye Newsletter Sign-Up uye WP Subscriber Pro.
Kana uchida kuendesa motokari yehupenyu kune webhusaiti yako kana kuvandudza kutsvakurudza injini, iwe unofanirwa kuwedzera mapeji ako ewebhu se SEO. Kuwedzera meta zvinyorwa, tsanangudzo uye meta tags manyore zvakanyanyisa uye zvinogumbura, asi kubatanidza ma plugins kuwebsite yako kuchabvisa bhuku rinoda uye richakubatsira iwe kuwedzerwa ruzivo rwakakodzera munguva imwechete. Izwi rakanakisisa uye rakakurumbira rinonzi WordPress plugins mune izvi nder WordPress SEO ne Yoast, One SEO Pack, uye SEO Yokupedzisira.
Senyaya yekuti, vese webmasters vanofanira kuziva nezvehuwandu hwewebsite yavo. Pasina zivo yakakodzera pamusoro pehutano hwemotokari yako, haugoni kutora zvakakodzera kushambadzira zvisarudzo. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kubatanidza nzvimbo yako uye kuisa Google Analytics seti analytics zana pairi. Jetpack inobatsirawo kuenda nayo sezvainowana zvakarurama dheta kwauri pasina kusika chero kupi zvako kunokonzera iwe.
Mapeji anouya anoita basa rinokosha pakuvandudza nekusimudzira kutendeuka kwehuwandu. Kana iwe uchida kuwedzera kutengesa kutengesa kunotungamirira mukushambadzira kwekugadzira, kushandiswa kwemashoko ezveshumo, nekushambadzira kwemaimeri, unofanira kuwana mapeji anobatsira ekumisa. Peji yekutenderera inogona kuita kuti vashandisi vanyora mabhuku enyu uye vanoita kuti zvigone kuwanikwa. MuShokoPress, kune ma plugins akasiyana-siyana ekukubatsira iwe kugadzira mapepa ekumanikidzirwa kumisa, asi Landing Mapeji, Zedity uye Optimize Press 2.0 ndiyo yakanakisisa.
6. Zvakafanana uye zvakakurumbira mifananidzo
Vanenge vese webmasters vanorwisana nechinetso chekukwirira kwepamusoro. Vashandisi vauya pawebsite yako, verenga zvinyorwa, sega uye ugogovera, uye enda kune dzimwe nzvimbo. Izvi zvinoitika kana iwe usingarevi nyaya yako isinganzwisisiki. Mushanyi haazopedzi maawa masere matatu pawebsite yako uye iwe unoda kuderedza kuwedzera kwezinga rekutsvaga injini yekutsvaga. Izwi rakanyanya kudarika WordPress plugins rinogona kuwedzerwa Rakakurumbira kana Related posts panzvimbo yako ndeye WordPress Related Posts, uyeYet Rimwe Related Posts Plugin.
Nzvimbo dzezvemagariro evanhu dzinotibatsira zvikuru pakushambadzira paIndaneti. Inenge dzose mawebsite anotarisa pakufambisa motokari kubva kumagariro evanhu. Nevanopfuura makumi mapfumbamwe kubva muzana vanhu vanoshandisa Facebook ne Twitter kuti vataure nemhuri neshamwari, hapana chinhu chiri nani pane kushandisa social media plugins kuti uzviite. Iyo yakanakisisa WordPress plugins munyaya iyi ndeyekupedzisira Social Deux, Floating Social Bar, uye The Social Links Source .